राजनीति र प्रशासनमा खराब को ? : RajdhaniDaily.com -
सागर पण्डित - May 9, 2021 0
Home बिचार राजनीति र प्रशासनमा खराब को ?
मुलुकको विकास र समृद्धि आशातीत रूपमा हुन नसक्नुमा को दोषी ? राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासनिक संयन्त्र ? भन्ने प्रश्न र बहस नयाँ होइन । अहिले फेरि यस प्रकारका बहस सतहमा आउन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीमा खराब प्रवृत्ति हाबी भएकाले सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । उनीहरूले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई यस प्रकारको आरोप लगाउने गरेका छन् । यद्यपि, नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल सुधार र रूपान्तरण आवश्यक छ । तर, त्यसरी सुधार र रूपान्तरण गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ ।
हरेक शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन र मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न नेतृत्वमा दूरदरर्शिता देखिनुपर्दछ । दूरदरर्शितालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा राजनीति गर्न सके भने त्यो बलियो हुन्छ र त्यसले परिणाम पनि निकै सकारात्मक दिन सक्छ । तर, वर्षांैदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा हामीकहाँ राजनीति व्यापार व्यवसायजस्तो बनिरहेको छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिले यसलाई पैसा कमाउने भरपर्दो माध्यमको रूपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण राजनीति निकै विकृत बन्दै गइरहेको छ र जनताको दृष्टिमा समेत आलोचित हुनेक्रम बढ्दो छ । लोकतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली यति धेरै महँगो हुँदै जान थालेको छ कि जुनसुकै चुनाव जित्नका लागि पनि लाखौं करोडांै रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । जब निर्वाचन निकै महँगो हुन्छ, तब राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचन जित्नकै लागि पहिलादेखि नै मनग्य पैसा जम्मा गरेर राख्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उसले जस्तोसुुकै हर्कत अपनाउन पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति मुलुक र मुलुकवासीका लागि निकै घातक छ ।
अब कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई जनताको नजरमा खराब हुनबाट बचाउन यथास्थितिबाट माथि उठ्नैपर्छ । आधुनिक कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी)ले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । उसले विज्ञताका आधारमा संविधान, ऐन, कानुन र नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले पनि नैतिकता दुवै पक्षमा अत्यधिक क्षयीकरण भएर गएको छ तर पनि नैतिकता र आचरणको क्षयीकरण रातारात सुधार हुन सक्ने विषय पनि होइन तर दुवै पक्षले सुधारका लागि नियमित पहलकदमी लिनुपर्छ ।
Breaking News सागर पण्डित - September 30, 2020 0
अधिकारकर्मी तुलसीपुरमा अनसन
Not-to-be-missed सागर पण्डित - May 29, 2020 0
तुलसीपुर । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्वर ८ सोतीमा भएको घटनाको विरोधमा तुलसीपुरमा दलित अधिकारकर्मीहरु अनसनमा बसेका छन् । जातिय विभेदकै कारण उक्त...
प्रदेश १ सागर पण्डित - September 9, 2020 0
Not-to-be-missed सागर पण्डित - March 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र निर्माता संघले चलचित्रकर्मीहरूलाई केही समय चलचित्रको छायांकन रोक्न आग्रह गरेको छ । सो आग्रहलाई मान्दै केही चलचित्रले आफ्नो छायांकन समय...
कला सागर पण्डित - February 8, 2020 0
काठमाडौँ, । शान्ति सापकोटाको छन्द कविता संग्रह ‘रहस्य’ र विजयराज आचार्यको लघुकथा संग्रह ‘राँगोलाई जुत्ता’ कृतिमाथि अन्तक्र्रिया गरिएको छ । बिहीबार पुल्चोकमा आयोजित...
बिचार सागर पण्डित - November 11, 2020 0
कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्र र सबै प्रकारका गतिविधिलाई ठप्प पारेको छ । मानिससँग मानिस डराउने वर्तमान परिस्थितिमा आम मानिसहरू हात बाँधेर घरभित्र बसिरहेका छन्...
Breaking News सागर पण्डित - December 12, 2020 0
बिचार राजधानी समाचारदाता - March 19, 2021 0
Not-to-be-missed सागर पण्डित - April 14, 2020 0